/Blog/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Effective Side Effects You Want to Avoid
Posted on 04 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Boldenone.
Ny zava-drehetra momba ny Garcinia Boldenone Undecylenate
1. Inona ny Equipoise (Boldenone Undecylenate)
2. Equipoise (Boldenone Undecylenate)
3. Equipoise (Boldenone Undecylenate)
4. Equipoise (Boldenone Undecylenate) Cycle sy Dosage
5. 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) ny vokatra hafa izay tianao hialana
6. Equipoise (Boldenone Undecylenate) famoronana homebrew
8. Aiza no misy an'i Boldenone?
Inona ny Equipoise (Boldenone Undecylenate)
Equipoise(Boldenone Undecylenate) Ny testosterone dia avy amin'ny steroid anabolic-androgen (AAS) izay efa tao an-tsena nanomboka tamin'ny 1940. Misy andiana Boldenone esters ahitana Boliviaona Cypionate, Boldenone Acetate.
Tamin'ny fampidirana, equipoise dia nampiasain'ny veterinariana hatrany am-piandohana tao amin'ny 1950s rehefa nampidirin'i Ciba ny maha-olona azy. Ny mpikaroka dia nanamboatra fitaovana ho an'ny soavaly mba hanatsarana ny filan-dry zareo sy ny lean-tsiranoka.
Bilaogera nampiasa azy io dia nampientanentana ny fiantraikan'io biby mampidi-doza io. Mba hanampiana izany, dia tsy nahatonga ny fitehirizana ny rano ka tsy nisy toerana ho an'io fijery ratsy tarehy io.
Azo jerena ao amin'ny sehatry ny fitsaboana izy mandra-pahatongan'ny 1970s taorian'izay dia nesorina. Ny maha-jiro tsy fahita firy azy dia azo atao amin'ny alalan'ny veterinariana sy ny tsena kely. Manana anarana momba ny varotra izy io, anisan'izany ny Bold-one, Boldoject, Boldane, Boldebolin, Equigan, ary Equidex.
Ny ankamaroan'ny bakteria dia niezaka ny hampitaha Deca ary Equipoise. Ny steroïde roa dia farafahakeliny amin'ny fihazonana ny masin'ny musculus ary koa amin'ny fandrosoana ara-batana. Izy ireo dia samy mahatratra izany amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny proteinina. Ny iray amin'ireo fahasamihafana dia ny mpampiasa Deca dia tokony hanaraka fitsaboana henjana mandritra ny diany noho ny fatran'ny estrogen tafahoatra azy.
Ny sasany amin'ireo zava-mahadomelina izay ampiasaina amin'ny bodyTailers amin'ny PCT dia ny Nolvadex, Clomid, ary Arimidex. Izany no iray amin'ireo antony maro ireo gurus dia mandinika ny fampiasana Equipoise. Ny olana iray hafa amin'ny Deca dia ny hoe mijanona ao amin'ny rafitra iray mandritra ny fotoana marobe. Satria afaka mandinika tsara ao amin'ny vatanao izy mandritra ny roa taona eo ho eo, ny atleta efa nisedra fitsirihana matetika dia aleony mampiasa Equipoise. Ny fotoana fitrandrahana Equipoise dia dimy volana eo ho eo.
Raha ny momba ny boldenone andecylenate ny vokany sy ny vokatra hafa dia ny equipoise mitondra ny andro. Ny Equipoise dia fantatra fa miteraka androgenic effects toy ny akne, volo volo, ary ny fahavoazan'ny volo raha matetika i Deca dia mifandray amin'ny fitehirizana ny fluid sy ny gynecomastia.
Deca dia safidy tsara ho an'ireo mikarokaroka raha toa ka ampiasaina amin'ny famaranana matetika ny equipoise. Tsy mahagaga raha ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny boldenone amin'ny famokarana satria manolotra vokatra tsara.
Raha hamaly izany rehetra izany, Equipoise dia maneho fitiavana be indrindra amin'ny olon-drehetra noho ny fihenanam-pandaminana fa mitazona izany amin'ny lafiny hery hery sy hery fa tsy mametraka anao amin'ny alahelon'ny fijaliana vokatry ny fatiantoka amin'ny endrogenika. Azo atao ihany koa ny ampahany amin'ny lavaka lava kokoa. Ankoatra izany, Equipoise manosihosy ny fanaparitahan'ny Deca amin'ny fanaparitahana ny famokarana sela mena ary ny fanentanana ny fiankinan-doha.
Boldenone Undecylenate dia mizara fitovozana kely amin'ny testosterone raha ny momba ny fanatsarana ny masomboly. Samy nahazo mpandresy lehibe avokoa ny steroids ary nahazo ny fahafahana:
Ny fitazonana azota dia mitarika amin'ny fitomboan'ny taovam-pananahana na ny fihazonana azy.
Ampiheno ny isan'ny hormones glucocorticoid
Ny fikikisana ny glucocorticoids dia manala ny fihenan'ny proteinina ho lasa singa madinika toy ny amino asidra. Izany dia midika fa ny testosterone sy ny equipoise dia afaka mampihena ny fizotran'ny metabolism.
Miaraka amin'ny fihenan'ny hormones glucocorticoid, ny habetsahan'ny fotoana iankinan'ny hozonao mba hahasitrana aorian'ny fampiofanana dia mihena be.
Hampitombo ny output IGF-1
Tahaka ny fitomboan'ny tsimokaretina VIH / SIDA 1 (IGF-1) manampy ny mamerina sy mamerina ny sela manerana ny vatana. Noho izany, misy ny fananganana ny hozatra lehibe kokoa sy ny fisorohana ny fandaniana hozatra. Equipoise sy testosterone hampitombo ny famokarana ny IGF-1 izay mampivoatra ny fanorenana bozaka.
Ampitomboy ny firaisan'ny proteinina
Ny proteinina dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny vatana. Izy ireo no mahatonga ny vatana hitombo na hiova. Rehefa misy famandrihana proteinina bebe kokoa ao amin'ny vatana, dia misy ny fanamboarana hozatra sy ny fantsom-batana. Vokatr'izany, afaka manofana mafy kokoa sy maharitra kokoa ny olona.
Ny fanamafisana ny tiroida tsara kokoa dia midika fa rehefa manandratra lanja kokoa noho ireo izay nampiasainao ianao; Ho sitrana haingana ianao satria hihatsara ny dingam-panavaozana.
Ny vokatry ny fampiasana boldeone tsy eken'ny olonas in bodybuilding
Na eo aza ny fametrahana ny ezaka rehetra ataonao ao amin'ny gym, tsy mbola nisy ve? Mety hahakivy fa rehefa miasa mafy mafy ao amin'ny gym, mbola tsy nampidirinao ny tongotrao. Raha mitady zavatra foana ianao izay afaka manampy anao amin'ny famenoana haingana, azo antoka ary mahomby, dia hilaza aminao ny tsiambaratelo aho.
Manontany tena ianao hoe inona no ampiasaina amin'ny bolidone tsy ekenina? Avy eo dia tsy nahita ny vokatra be dia be izay vokatry ny boldenone undecylenate. Na dia maka fotoana kely aza izany, io steroid io dia ahafahan'ny olona hahatsapa amin'ny fomba mahavariana. Mampitaha an'i Boldenone vs Deca Durabolin na Anadrol, tsy ho toy ny haingana ny valim-boldenone.
Ny tombontsoa amin'izany dia ny fandrosoana maharitra fa tsy vokatry ny fitehirizana ny rano. Koa raha te-hijery tsara sy ho lahatenin'ny tanàna ianao dia ny Boldenone Undecylenate no làlana handeha.
Ampitomboy ny fiankinan-doha
Fantatrao angamba fa tsy afaka mampitombo ny masirinao ianao raha tsy ampy ny fandaniana. Toy ny tranobe iray mila fitaovana ampy tsara, ny hozatra dia mila kojoka, asidra amine, ary proteinina izay be dia be mba hitomboany. Mampalahelo fa tsy mahafantatra ny fomba hanaovana izany ny ankamaroan'ny mpikaroka.
Indraindray, ny mpamboly iray dia afaka manolotra sakafo farafahakeliny kaloria fanampiny iray isaky ny andro iray mba hikabary amin'ny hozatra kokoa. Indraindray dia mety mbola betsaka kokoa izany.
Be dia be ny sakafo ho an'ny rehetra, ary mety ho sarotra amin'ny olona maro ny mandany ny antsasany. Mety ho azonao atao ny miala amin'ny kaloria misimisy kokoa mba hahalalanao fa mijanona ianao alohan'ny hahitanao ny fiovan'ny toetranao. Ny vaovao tsara dia ny iray amin'ireo bolidone ampiasaina amin'ny taovam-pandevonan-tena dia ny mamaha tsara ny filana ambany dia manampy anao hahatratra ny tanjon'ny vatanao.
Miaraka amin'ny dosie tsy mitongilana ho an'ny tsy manam-bola, dia mety hahita fiovana lehibe eo aminao ianao komana. Vokatr'izany, afaka mihinana kaloria sy proteinina maro araka izay tianao ianao. Ny fampiasana karba maro dia hampitombo ny habetsaky ny glycogène ao amin'ny selam-pandrika toy izany mba hanomezana hery anao bebe kokoa raha ao amin'ny gym. Noho izany dia ho afaka hampiakatra lanjam-piakarana bebe kokoa ianao noho ny nanesorana anao tamin'ny lasa. Izany no antony mahatonga ireo mpandoka bozaka sy atleta izay miady amin'ny fiankinan-doha tsy tapaka foana.
Ny hery no mahatonga ny halehibe. Miezaha ary tsy miraharaha tombony amin'ny tanjaka ary ho hitanao fa tsy tonga amin'ny tanjona tianao hahatongavana ny hozanao.
Ny fampitomboana ny tanjaka dia iray amin'ireo ampiasain'ny bolidone amin'ny fampiasan'ny vatany. Manatsara ny herin'ny tena izy izay tena mahasoa indrindra amin'ny planina manerantany. Ny hatsarana miaraka aminy dia ny fampiroboroboana ny atletisma ihany koa.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny tanjaka, dia ho afaka hiasa bebe kokoa ianao, raha tsy manahy ny tenanao. Afaka miteny ianao hoe inona no ho vokatr'izany. Ny fiofanana bebe kokoa dia midika fa mihatsara ny hozatra ankehitriny.
Ny fampihenana dia iray amin'ireo Boldenone tena tiany ampiasaina amin'ny fambolena. Matetika ny mpanao biriky sy ny mpifaninana no maniry ny hanaisotra ny siramamy tafahoatra ary hijery haingana araka izay tratra.
Boldenone Undecylenate dia steroid avoaka izay fiarovana tsara indrindra amin'ny masin'ny lefona. Raha vao fantatrao hoe ahoana no ahafahanao mihazakazaka equipoise ao anaty famoam-bary, dia ho gaga ianao amin'ny fomba hahafahanao mamoy ny siramamy tsy mila anao raha mbola marefo ny hozanao. Ny Boldenone anao mialoha sy aorian'ny sary dia ho porofo fa olon-kafa tanteraka ianao.
Ho very fanasitranana ny vatanao, tsy maintsy manana fiantraikan'ny kaloria ianao. Midika izany fa mila mandoro kaloria bebe kokoa noho ireo izay mandany ianao. Mampalahelo fa mety hampihena ny tebitibinao ny voka-dratsin'ny kaloria rehefa mikasa ny hanome fahafaham-po ny fitakiana angovo ny vatana. Ny sakafo tsara dia mety hiaro anao amin'izany, saingy mety tsy ho azo antoka izany.
Mba hisorohana ny fahaverezan'ny hozatra dia niady mafy ianao mba hahazoany; Afaka misafidy ny handray equipoise ianao. Tsy vitan'ny hoe hiaro ny hozatry ny toaka avy amin'ny fahaverezana fa manana fiantraikany tsara koa eo amin'ny vatanao izany.
Betsaka maro no mampiasa azy io eo amin'ny tendron'ny famokarana ary nijanona nandritra ny roa ambin 'ny folo satria mety hiteraka voka-dratsiny hafa izy io.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Cycle sy Dosage
Equipoise dia mivoatra amin'ny fahaiza-manao, satria azonao ampiasaina irery izany na haka azy miaraka amin'ny hafa Anabolic Steroids. Ny steroid izay nofidinao dia miankina amin'ny zavatra tianao hotratrarina.
Ny cycles Equipoise dia azo sokajiana toy izao manaraka izao:
Ny fiantombohan'ny fiantohana-Raha mampiasa Equipoise ianao amin'ny voalohany, dia asaina maka 300-500mg amin'ny Testosterone Enanthate / Cypionate miaraka amin'ny 400mg amin'ny Equipoise isan-kerinandro. Tokony hihazakazaka mandritra ny efatra ambinifolo herinandro ny fihodinana voalohany. Mandritra io fotoana io, ny mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka mahatsapa ny tombony amin'ny ankapobeny.
Dingana avo lenta - Raha inoanao fa nahazo ny traikefa antenantenany ianao ary mbola tsy azonao antoka ny fomba handosirana Equipoise, ireto misy toro-hevitra sasantsasany; Mitovy amin'ny Equipoise miaraka Dianabol amin'ny dingan'ny 25mg isan'andro mandritra ny herinandro iray ka hatramin'ny efatra herinandro. Ho an'ny Equipoise, ny dosage kely dia kely kokoa amin'ny 400-600mg isan-kerinandro. Ny vanim-potoana farafaharatsiny tokony hodiavina amin'ity herinandro ity dia roa ambin'ny folo herinandro.
Ny haavony avo lenta - Ireo izay manana traikefa tsara dia voatery handray an'i Boldenone Undecylenateat ny dosage izay latsaky ny roa herinandro mahery amin'ny dosage 600mg isan-kerinandro. Trenbolone Enanthate dia mety ho steroid tsara indrindra mba hakana izany amin'ny dingan'ny 400mg isan-kerinandro.
Mety ho ny sokajy Equipoise ihany koa araka ny tanjona. Ireto ny sokajy anankiroa;
Toy izao ny fiakaran'ny dia:
Dianabol -30mg isaky ny andro voatondro amin'ny herinandro 1 hatramin'ny herinandro 8
Equipoise- 600mg isan-kerinandro no omena amin'ny herinandro 1 hatramin'ny herinandro 12.
Boldenone amin'ny famoahana tsingerina:
Winstrol-35mg isaky ny andro voatondro amin'ny herinandro 1 hatramin'ny herinandro 8
Equipoise- 500mg isan-kerinandro no omena amin'ny herinandro 1 hatramin'ny herinandro 12
Ny Boladona sy Testosterone karazana toy ny tandindona dia mety hitovy amin'izany;
iombonana amin'ny levitra Duration
Equipoise 400mg / herinandro 15 herinandro
testosterone Enanthate 500mg / herinandro 15weeks
Ity misy iray hafa azo atao amin'ny fomba fitantanana equipoise;
Week Turinabol Equipoise Testosterone cypionate Nolvadex
1 50mg isan'andro 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
2 50mg isan'andro 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
3 50mg isan'andro 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
4 50mg isan'andro 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
5 50mg isan'andro 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
6 50mg isan'andro 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
7 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
8 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
9 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
10 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
11 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
12 400mg isan-kerinandro 500mg isan-kerinandro
13 500mg isan-kerinandro 20mg isan'andro
14 500mg isan-kerinandro 20mg isan'andro
15 20mg isan'andro
16 20mg isan'andro
17 20mg isan'andro
18 20mg isan'andro
19 20mg isan'andro
20 20mg isan'andro
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Dosage
Mba hisorohana ny fijaliana amin'ny voka-dratsin'ny angovo, mila manaraka ny torolalana mety ianao. Tadidio ny haavom-panafody azonao, ny fahatratrarana anao dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny vokatra estrogenic. Tokony handray ny dosage mety koa ianao mba tsy hahalalanao ny tombontsoa.
Amin'ny ankapobeny dia ny dosage Boldeone Undecylenate dia miorina amin'ny 200-400 mg isan-kerinandro. Ho an'ny lehilahy, ny dosage an'ny 400mg dia nandeferina ary ny tahan'ny kely indrindra dia ny ankamaroan'izy ireo dia hisafidy ny handray. Ny sasany dia mandeha amin'ny 600mg satria azo ekena ihany koa ary ny vokatry ny equipoise dia azo tratrarina.
Rehefa mandinika ny asa efa ela ny equipoise dia maro ny lehilahy mitantana / mahazo fitsaboana iray isan-tsokajy isan-kerinandro. Ny dosen'ny Undecylenate Boldenone dia azo zaraina ho roa na telo latsaka kely ihany koa. Ny halavan'ny androm-piainan'ny Boldenone Undecylenate dia mamela fandaharam-potoana fampidiran-doha matetika kokoa miaraka amin'ny vokatra mahomby kokoa.
Ho an'ny vehivavy, ny dosie Standard Boldenone Undecylenate dia 50mg isan-kerinandro. Miaraka amin'io dosage io dia tsy fahita firy ny virilizing, fa miankina amin'ny olona ny fahatsapany. Ny vehivavy sasany dia afaka mandefitra ny dosage amin'ny 75-100mg, fa ianao kosa dia omena torohevitra mba tsy hanomboka haingana toy izany mandra-pahazoanao antoka fa ny vatanao dia mahazo aina amin'ny 50mg isan-kerinandro.
8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) mamely anao'll te hiala
Ny voka-dratsin'ny Equipoise dia tsy mavesatra toy ny voan'ny steroids hafa. Ireo izay mahafantatra ny fihazakazaka equipoise araka ny tokony ho izy, dia tsy dia mitaraina loatra amin'ny vokany hafa.
Na dia misy aza ny tatitra momba ny Boldenone Undecylenate dia mety hiverina amin'ny estrogen, dia mitranga tsy misy izany. Ny fihetsika estrogen dia mety ho kely kokoa raha ampitahaina amin'ny boldenone vs deca, Fa ny antsasaky ny testosterone.
Mba hampihenana ny fahasarotan'ny voka-dratsiny, tokony handray dingitra tsara ianao. Afaka manomboka amin'ny dosage ambany ianao ary hampitombo azy rehefa manitsy ny vatanao. Rehefa manao izany ianao, dia afaka mandinika ny fahatsapana amin'ny vatanao momba ity steroid anabolic ity.
Raha mahatsikaritra ny fiantraikany amin'ny tongotra na ny tongotra ambany ianao, dia mipoitra eny amin'ny vava na ny orona na ny vatany, ny fanaintainan'ny taolana, ny fiterahana ny ra, ny lozan-tany tsy mahazatra, ny halatra, ny hafanana, ny fahazoana mavesatra, ny fitenenan-dratsy, ny tsy fahamendrehana Ny fandatsahan-drà na ny fikoropahana matevina / mainty / mainty dia mitady fanampiana ara-pitsaboana.
Nandritra ny androm-pikatrohanao Equipoise, dia mety hijaly ianao amin'ny fanafoanana testosterone. Ny fihenan'ny famokarana testosterone voajanahary dia mety misy vokany hafa.
Ao amin'ny fianarana natao tamin'ny bitinina lahy, nanindrona azy tamin'ny Equipoise niteraka fahasimbana manan-danja ny fanavakavahana, indrindra fa ny fitsaboana testosterone. Tsy vitan'ny hoe nihena ny famokarana testosterone fa nitombo ihany koa ny ambaratonga estradiol.
Ny ankamaroan'ny mpiserasera dia mijaly noho ny fihenan'ny serum leptin serum. Ny haavon'ny testosterone iray dia mety hikorontana raha vao vita ny voalohany.
Equipoise dia mety hisy fiantraikany amin'ny anao Life SEX Miala tsiny noho ny fanafody testosterone sy ny herin'ny estrogen izay tonga amin'ny. Mety hampidina ny libido ianao, ary mety hanan-java-manahirana ny manao firaisana.
Indraindray, mety mahatonga ny gynecomastia ho fantatra koa ny olona boobs, toe-javatra izay mety hampidina ny fiheveranao ny tenanao manokana. Tsy misy olona maniry ny hahita ny vehivavin-dry zareo mahita fa nahazo ny bandy lehilahy izy ireo ho solon'ny hareza mafy.
Mbola ratsy kokoa aza ny fimenomenonanao, ka mety hitera-doza ho anao koa ny sira sy ny fahaverezan'ny fahatokisan-tena. Miaraka amin'ny voan'ny androngo, dia azonao antoka fa mety ho sarotra ny miteraka ankizy.
Toto malemy hoditra
Noho izy steroina anabolika sy androgenic, dia mety hanome anao ny endriky sy ny haingo izay efa nirinao foana i Boldenone ary ampifandraisiny amin'ny toetoetran'ireo lahy sy vavy toy ny akne sy ny hoditra.
Ny equipoise dia mampitombo ny famokarana solika izay matetika miaraka amin'ny fisarahana. Amin'ny ankapobeny, ny akne dia miseho eo amin'ny tarehy sy ny aoriana. Indrisy fa ny fampiasana ny soso-kevitra amin'ny sigara dia mety ho tsy misy dikany satria ny akne dia vokatry ny fitomboan'ny androgenika ao amin'ny vatana.
Ny voa sy ny voka-bary
Ny Equipoise dia mety miteraka fahavoazana ara-boajanahary, vokatry ny fanovana ny habe, ny endrika ary ny asan'ny voa iray. Izany dia mitranga amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ampiroboroboana amin'ny hoe ity steroid ity dia androgenic.
Ao amin'ny fianarana natao tamin'ny biby, ny bitro lahy natao tamin'ny equipoise dia naneho marika ny hepatic (aty) sy ny fahasitranana (voa). Toy izany koa no mitranga amin'ny olona, ​​ary azo atao izany amin'ny alalan'ny fianarana ao amin'ny Journal of Sports, Medika sy Physical Fitness.
Ny vehivavy dia manatsara ny toetran'ny lahy
Ny vehivavy eo amin'ny equipoise dia mety hijaly noho ny virilization. Ny dikan'izany dia ny fahitan'izy ireo fa nanomboka nanomboana ny toetra sy ny endri-javatra izay tokony hitranga amin'ny lehilahy ihany. Ohatra, mety hahatratra ny tanjaky ny arintany izay tadiaviny izy ireo, kanefa koa maniry ny volom-bolo tsy mety amin'ny tarehy. Ny vehivavy dia tsy tia ny volombavan'izy ireo amin'izy ireo, ary mety ho toy izany ny fialana amin'izany.
Ho fanampin'izany, ireo vehivavy ao amin'ny equipoise dia mety hamoy ny sasany amin'ireo endri-pitenenany, mihamitombo ny herisetra ary mahatsapa ny feo lalindalina koa.
Mitombo ny kolesterola
Raha oharina amin'ny steroids hafa anabolika, ny equipoise dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny rafi-kodiandro. Na izany aza, misy ny fahafahana iray mijaly vokatry ny fiantraikany ratsy eo amin'ny kolontsaina iray. Tahaka ny steroids androgenic hafa dia mety hampidina ny HDL (kololaly tsara) ary hampiakatra ny LDL (kolesterola ratsy)
Mba hanoherana izany, mitandrema ny sakafo mahavelona amin'ny fihinanana sakafo mahasalama ary manampy ireo cardio fampiharana amin'ny programa fanofanana.
Ny fanafody miaraka amin'ny Equipoise dia mety hahatonga anao hijaly amin'ny aretim-po. Ny antony mahatonga izany dia satria ny fampiasana azy dia mety hitarika amin'ny toe-javatra mety hampidi-doza.
Equipoise dia afaka nanamboatra ny fomban'ny lahy ary nanamboatra olona izay tsy nieritreritra mihitsy ny hijaly amin'izany.
Equipoise (Boldenone Undecylenate) famoronana homebrew
Ny Boldenone Undecylenate recipe ho an'ny vaksina steroid dia izao manaraka izao
EQ 300mg / ml Recipe amin'ny 100ml
Loko volomparasy 62.5ml
Boldenone cypionate dia ety ambany kokoa raha oharina amin'ny tsy endriky ny iray. Bolidenone Cypionate ny antsasaky ny fiainana dia lava lava be ary ny boldenone cypionate fotoana fiterahana afaka afaka nandeha hatramin'ny naharitra iray taona sy tapany. Noho izany, ny dose Boldenone Cypionate dia miteraka imbetsaka matetika. Tsy mahagaga raha tsy mampiasa steroid ny Cypionate Bolideone Cypionate ireo tsy tia fanindroany. Ny dosie mahazatra Boldenone Cypionate dia eo anelanelan'ny 100-150mg isaky ny ml.
Ny steroido Bolideone Cypionate dia ampiasaina mba hitondra ny soavaly hanampy azy ireo hampiakatra ny lanjany, ary hanatsara ny akanjo volony sy ny toe-batana ankapobeny.
Ny Acetate Boldenone fantatra amin'ny anarana hoe Equipoise fohy dia steroid izay misy ester hafa mifandray amin'izany. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny fiarandalamby, fa ny bodibotsim-pitiavana dia tia azy io Boldenone Acetate soa indrindra amin'ny masonta mena. Ny dosage Acetate Boldenone dia 400-800mg indray mandeha isan-kerinandro.
Boldenone Acetate homebrew recipe (lisitry)
Ny recette Acetate Boldenone;
18 Benzyl Benzoate 18ml
100g Acetate Acetate 80ml
Boldenone Cypionate homebrew recipe (lisitra)
Ny recipe Cypionate Boldenone dia ahitana;
Xenumml Ethyle oleate
Aiza no misy an'i Boldenone?
Amin'ny maha mpandidy bodista anao na mpilalao ara-panahy, dia mijery ny fotoana rehetra ianao amin'ny zavatra iray izay hametraka anao ambony indrindra amin'ny lalao. Any amin'ny firenena maro, anefa, ny fampiasana Anabolic Steroids dia voarara, ary mety ho sarotra aminao ny miditra amin'izy ireo. Na izany aza dia afaka miditra mora aminy ianao amin'ny alalan'ny tranonkala araka ny tokony ho izy. Ny fividianana aterineto ihany koa dia mitondra tombony bebe kokoa, anisan'izany ny fizotry ny fividianana tsy misy farany.
Ao amin'ny aterineto, azonao atao ny mamaky bebe kokoa ny steroid izay tianao hividy. Ohatra, eto dia azonao atao ny mamaky momba ny takelaka Acetate Boldenone, Boldenone Cypionate homebrew, inona no ampiasain'i Boldenone ary zavatra hafa tianao ho fantatra momba izany. Amin'ny fotoana anapahanao hevitra amin'ny fividianana izany, efa voaomana tsara amin'ny fampahalalana rehetra momba ny fampiasana azy ianao. Ary mba ahafahana manamaivana maimaim-poana ho anao, dia azo omena amin'ny fampiononana ny tranonao na ny birao izany fampahalalana rehetra izany.
Ireo mpivarotra an-tserasera mivarotra amin'ny vidiny tsaratsara kokoa raha oharina amin'ny fivarotana vatana. Ny vidin-javatra Boldenone dia mora kokoa amin'ny aterineto satria mety hanatsara kokoa ny fifanarahana ianao. Ankoatra izany, mety hahazo fihenam-bidy ho an'ny fividianana entana ianao. Iza no tsy tia mamonjy amin'ny vola madinika iray?
Fantatrao ve fa afaka mividy Boldenone tsy fantatra anarana ianao raha tsy misy olona mahalala izany? Ao amin'ny aterineto, azonao atao ny misoroka ireo fanontaniana maro izay mety ho tsapanao fa somary mahamenatra. Ianao sy ny orinasa ihany no mahafantatra izay ao anatin'ny fonosana ary ny olon-kafa dia hahita ny hozatry ny hozatra.
The Boldenone for sale dia manana toetra miavaka ary tsy handiso fanantenana anao velively. Tsy voapentina izy ary tsy hametraka ny fahasalamanao velively. AASraw iray tranonkala ara-dalàna izay manamboatra ny vokatra miaraka amin'ny fitaovam-piasan'ny zavakanto. Azonao antoka fa ny Boldenone amidy amidy dia hanome anao ny vokatra tianao.
Azonao atao koa ny te hividy fitaovana ho an'ny soavaly. Avelao izy anio, ary tsy ho sambatra intsony ny vatanao.
The Masteron Enanthate The Longer Acting And Steroid Anabolic Steroid (AAS) Ahoana no fomba hifidianana mpamatsy poids amin'ny steroids ao amin'ny 12 Dingana